१० बज्ने बित्तिकै ३५० भन्दा बढी कामदार त्रिभुवन विमानस्थलको रनवे पस्छन् (यसरी हुँदैछ काम, फोटो फिचर) | गृहपृष्ठ
Home फोटो फिचर १० बज्ने बित्तिकै ३५० भन्दा बढी कामदार त्रिभुवन विमानस्थलको रनवे पस्छन् (यसरी हुँदैछ काम, फोटो फिचर)
on: ११ बैशाख २०७६, बुधबार १४:२५ फोटो फिचर, मुख्य खबर
विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाखबाट ५ करोड रुपैयाँ -
वैशाख ११, काठमाडौं । झण्डै ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको नयाँ कालोपत्रे गर्ने कार्य तिब्र गतिमा अघि बढेको छ । सन् १९७५ ताका निर्माण गरिएको विमानस्थलको धावनमार्गको पिच पहिलोपटक पुरै फालेर नयाँ पिच गर्न काम भइरहेको छ । नयाँ पिचले पुनः ३० देखि ४० वर्षसम्म काम दिने छ ।
चीनको सरकारी कम्पनी चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङले रू. ४ अर्ब २७ करोडमा रनवेको स्तरोन्नतिको काम गर्दैछ । यो कामको लागि नेपाली र चिनियाँ गरी दैनिक ३५० जनाभन्दा बढीको जनशक्ति खटिरहेको छ । अप्रिल १, २०१९ बाट शुरु गरिएको रिह्यावको काम ३ महीना भित्र सक्ने नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गको पिच पटक–पटक उप्किने चिरा पर्ने समस्या हटाउन धावनमार्गको पिचलाई पूर्ण रुपमा नयाँ बनाउने योजना अनुरुप यो परियोजना शुरु गरिएको हो । धावनमार्ग निर्माणको कामका लागि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राति १० बजेबाट बिहान ८ बजेसम्म बन्द रहन्छ । विमानस्थलका उडान बन्द हुनासाथ तयारी अवस्थामा रहको जनशक्ति विमानस्थल प्रवेश गरी काममा खट्ने गरेका छन् ।
विमानस्थलमा नोटाम (नोटिस टु एअर मेन) लाग्नासाथै काम शुरु हने र बिहान ८ बजेसम्म पुनः नियमित उडान गर्न मिल्ने गरी रिह्यावको काम भइरहको प्राधिकरणमा महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । एक मिनेट मात्रै काममा ढिला हुँदा पनि बिहान जहाज होल्ड गराउनुपर्ने अवस्था आउँछ । दिनमा गर्न हामीसँग अर्को विमानस्थल नभएकाले सम्भव छैन ।’
अहिले केही घण्टा विमानस्थल बन्द गर्दा केही समय समस्या देखिएपनि यसको निर्माण भइएसक्दा यसले दिने परिणाम सुखद हुने गौतमको भनाइ छ । काम शुरु भएपछि वर्षाका कारण एक दिनमात्रै पूर्ण रुपमा काम रोकिएको महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए ।
जब राति १० बजे विमानस्थल बन्द हुन्छ । विमानस्थलको धावनमार्गको दक्षिण क्षेत्र (जिरो टु) तर्फबाट निर्मााण कम्पनीले काम शुरु गर्छ । तम्तयार अवस्थामा बसेका उपकरणसहितको जनशक्ति विमानस्थलको (जिरो टु) रनवेमा प्रवेश गर्छ । रनवेमा पुगेका उपकरणमध्ये मिलिङ (पुरानो पिच उप्काउने) मेसिनले पिच उप्काउने काम गर्छ । मेसिनले तीन चरणमा १०/१० सेन्मिटरका दरले पिच काट्ने काम गर्छ । उसको अगाडी तयारी अवस्थामा रहको ट्रिपरमा मिलिङ मेसिनले काटेको पिच स्वचालित मेसिनबाट सिधै लोड गरिन्छ । पिच उप्काइएको ठाउँमा सफा गरी पुनः तीन चरण गर्दै आधुनिक पेभलर मेसिनबाट नयाँ पिच गरिन्छ । रनवेमा राति १० बजेबाट बिहान करीब ५ बजेसम्म काम गरिन्छ । रनवेमा थपिएको नयाँ पिच सेट हुन कम्तिमा ३ घण्टाको समय लाग्ने हुँदा ८ बजेसम्म त्यसै छोडिने गरिएको नागरिक उड्ययन प्राधिकरण अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हवाई क्षमता अभिवृद्धि तथा विस्तार परियोजनाका प्रमुख बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए ।
हरेक दिन अवस्था हेरेर निश्चित मिटर रनवेमा स्तरोन्नतिको काम हुने गरेको र हालसम्म करीब २५० मिटर रनवेको पिच फेरिएको उनले बताए । यही प्रक्रियाअनुसार ३ महीनाभित्र ३ किलोमिटर ५० मिटर लामो धावनमार्ग पुरै नयाँ बन्नेछ । धावनमार्गको कामसँगसँगै सेन्ट्रल लाइट (धावनमार्गको बीचमा जमिन मुनि राखिने लाइट) राख्ने काम पनि सँगसँगै भइरहको छ ।
रिह्याबको काम गरे विमानस्थल २४ घण्टा नै सञ्चालनका लागि योग्य हुने प्राधिकरणको धारणा छ । रनवेको काम सकिएपछि ८ महीनाभित्र ‘ट्याक्सी वे’को काम सक्ने योजना प्राधिकरणको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय उडान गरी दैनिक सरदर ४०० उडान हुने गरेको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १५:२६
२३ भन्सार कार्यालयमध्ये ११ बाट निर्यात शून्य,सबैभन्दा बढि निर्यात वीरगञ्ज भन्सारबाट
२७ बैशाख २०७६, शुक्रबार १६:५४
१२ अर्ब लगानी गर्दा नेपालगञ्ज विमानस्थल कस्तो बन्ला ?
१२ बैशाख २०७६, बिहीबार १४:०१
२२ घण्टा सञ्चालन भएको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल १४ घण्टा मात्रै खुल्ने
१७ चैत्र २०७५, आईतवार १४:३८